 » RFID ဆကျကပျ Tag ကို » တုရုမြို့နေ့က
embedded လှိုင်းနှုန်းသည် UHF တုရုမြို့နွေ Tag ကို, anti-theft တုရုမြို့စီမံခန့်ခွဲရေးနွေ Tag ကို
တုရုမြို့နေ့က Anti-counterfeiting Tyre Management Spring Tag, Anti-theft Spring Tire Tag, Anti-theft Tyre Management Spring Tag, Embedded UHF Tire Spring Tag, Embedded UHF Tyre Tag, UHF Embedded Tyre Tag
အသေးစားအရွယ်အစား, soft, suitable for embedded tires.
RFID ချစ်ပ်: ဂြိုလ်သား h3
frequency: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 860 ~ 960 MHz (အဆိုပါ ETSI စံနှုနျးနှငျ့အညီ)
protocol စံ: ISO ကို 18000-6C, EPC Class1 Gen2
Store ကိုသတင်းအချက်အလက်: EPC-96bit, အသုံးပြုသူမှတ်ဉာဏ်-512bit, TIME က-64bit
အလုပ် mode ကို: ဖတ်ရေး
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 0-2M က (အင်တင်နာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်အရ)
အကြံပြုအသုံးပြုမှု: အပူချိန် -25 ℃ ~ + 230 ℃
Store ကိုစိုထိုင်းဆ: 20%-90%
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -40℃ ~ + 230 ℃
ရှုထောင့်: 841mm အချင်း×မီလီမီတာအရှည် (သံကြိုး), 4မီလီမီတာအကျယ် (ချစ်ပ်)
UHF Embedded Tyre Tag, anti-အတု
UHF RFID embedded tire tag design, အပူချိန်မြင့်, especially in the tire curing process, and can last the entire life of the tire, track the tire from manufacture to the user, until the scrapped the whole process. Operates in the band 860~960MHz and hasareading distance of up to 1 မီတာ. Complies with ISO 16000-6C or EPC class 1 Gen2 standards.
I am interested in your product Embedded UHF Tyre Spring Tag, anti-theft တုရုမြို့စီမံခန့်ခွဲရေးနွေ Tag ကို
နောက်တစ်ခု: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF တုရုမြို့စီမံခန့်ခွဲရေး Tag ကို, ရော်ဘာပစ္စည်းတုရုမြို့ Tag ကို, ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု Tag ကို